Life ကို Balance ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုနေမလဲ – Live the Dream
Life ကို Balance ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုနေမလဲ
General ,ဆောင်းပါးများ ,ဘဝ
အခုခေတ်မှာ အလုပ်တစ်ခုတည်းလုပ်တယ်၊ ကျောင်းတစ်ခု တည်းတက်တယ် ဆိုတာ တော်တော်ရှားသွားပါပြီနော်…..ကျောင်းတက်ရင်းအလုပ်လုပ်တာ ဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်အတွက် လိုလို့သင်တန်းတက်ရင်းအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်ဖြစ် working life နဲ့ studying life ရှိနေကြတာပါပဲ… အဝေးသင်တက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုလည်း ခုဆို assignment တွေရေးနေရမယ်၊ နေ့ဘက်အလုပ်လုပ်၊ ညဘက် assignment ရေးနဲ့ အိပ်ရေးမ၀ အလုပ်မှာ စိတ်မကြည် ဖြစ်နေကြမယ်ထင်တယ်နော်။
Day တက်တဲ့လူတွေလည်း နေ့တိုင်းကျောင်းတက်၊ assignment တွေ၊ thesis တွေနဲ့ ဒီကြားထဲ တစ်ချို့တွေဆို day တက်ရင်း guide လိုက်သင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်း ရှိမယ်ထင်တယ်။ ဒီတော့ အဲ့ဒီ working life နဲ့ studying life ကို balance ညီအောင်မလုပ်နိုင်ရင် stress တွေပိလာမယ်၊ အလုပ်မှာမပျော်တော့ဘူး၊ စာမလိုက်နိုင်တော့ဘူးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ နောက်ဆုံး ဟိုဟာမပြီး၊ဒီဟာမပြီးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသုံးမကျဘူးဆိုပြီး depression ဝင်နိုင်ပါတယ်…အဲ့ဒီတော့ life ကို balance ညီအောင် လုပ်ရမယ့် နည်းလေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်….
၁။ ကိုယ်ပိုင် schedule ဆွဲပါ။
ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ကိုယ်က ကိုယ်ပိုင် schedule ဆွဲတတ်တဲ့လူဆိုရင် congratulations လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်…ဒါအရမ်းကောင်းတဲ့ အကျင့်လေးပါ။ မလုပ်တဲ့လူတွေလည်း ခုကစပြီး ကိုယ်ပိုင် schedule လေးဆွဲဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နော်…ခုခေတ်မှာ planner လေးတွေ၊ note book လေးတွေအလွယ်တကူဝယ်လို့ရပါတယ်။ planner လေးဝယ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်တွေ၊ assignment deadline တွေ၊ tutorial date တွေ အကုန်ထည့်ပါ။ တစ်လစာလုပ်ရမယ့်ဟာတွေ အကုန်ထည့်ပါ။ ဘယ်သွားသွားသယ်သွားပါ။ တစ်ရက်စာတစ်ရက်လုပ်ရမယ့် အလုပ်လေးတွေပါ နေ့တိုင်းရေးပါ။ တစ်ခုပြီးတိုင်းတစ်ခု ခြစ်ပါ။ ဒါဆို ကိုယ် တစ်နေ့ဘာတွေပြီးတယ်၊ မပြီးဘူးလဲဆိုတာအလွယ်တကူသိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ် တစ်နေ့တာကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချဖြစ်လား၊ အလကားကုန်ဆုံးသွားလားဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို အလုပ်ရော၊ ကျောင်းစာရော မလစ်ဟင်းနိုင်တော့ပါဘူး။
၂။ အရေးကြီးတာ အရင်လုပ်ပါ
Schedule ဆွဲတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေ၊ စာတွေအားလုံး ပစ်ထည့်၊ တကယ်ပြီးအောင်မလုပ်နိုင်…. အိုး….ဒါဆိုပိုဆိုးပါတယ်နော်….ငါဒါလေးတောင် မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး လူက self-confidence ပျောက်ဆုံးပြီး depression ဝင်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် priority လေးတွေခွဲပါ။ အရေးကြီးတာကိုပထမဆုံးရေးပါ။ ပြောချင်တာက ဒီနေ့ပြီးမှ ဖြစ်မယ့်အလုပ်မျိုးကို အပေါ်ဆုံးမှာထားပြီးရေးပါ။ နောက်မှ သိပ်အရေးမကြီးတာလေးတွေထည့်ပါ။ ဒါဆို အရေးကြီးတာတွေလည်းမမေ့တော့ပဲ deadline နီးမှ အမေကယ်ပါ၊ အဖေကယ်ပါ ဘ၀ ကနေလွတ်ပါမယ်နော်။
၃။ ဖုန်းသုံးတာ လျှော့ပါ
ကိုယ်တွေက ပြောလိုက်ရင် အချိန်သာမရှိတာ တကယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို မညာတမ်းပြောရမယ်ဆိုရင် ဖုန်းသုံးချိန်က တစ်နေ့မှာ ၃ နာရီအနည်းဆုံး ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ social media ပေါ်မှာ အလကားအချိန်ကုန်နေတာ အရမ်းနှမြောဖို့ကောင်းပါတယ်နော်။ ဖုန်းလုံးဝမသုံးရဘူးမဟုတ်ဘူး (အဲဒီလောက်တော့ မရက်စက်ပါဘူးနော်)…limit လေးထားပြီးသုံးကြည့်ပါ။ ပိုတဲ့အချိန်တွေမှာ အခြားအလုပ်မလုပ်ချင်ရင်တောင် ကိုယ်ပိုင် အချိန်လေးပေးကြည့်ပါ။ မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး သီချင်းအေးအေးလေး နားထောင်တာမျိုး၊ တစ်ယောက်တည်း စဉ်းစားခန်းဝင်နေတာမျိုး ၊ကိုယ်ဒီနေ့ဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲ ဆိုတာမျိုး ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ ဒါဆို ကိုယ့်စိတ်တွေပိုလန်းဆန်းလာပြီးတော့အာရုံစူးစိုက်မှုပိုအားကောင်းလာပြီး အလုပ်မှာရော၊ စာမှာပါ ပိုအာရုံစိုက်နိုင်မှာပါနော်။
တစ်ခုလိုချင်ရင်တော့ တစ်ခုစွန့်လွှတ်ရမှာပေါ့နော်။ကိုယ်က အလုပ်ရော ကျောင်းရော နှစ်ခုလုံးလုပ်နေရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း TGIF ချင်တယ်၊ hang out ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ sorry ပါနော်။ အဲဒီတော့ ပျော်တာလည်းပျော်ပေါ့။ အရေးကြီးတာလေး အရင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ပဲ hang out ပေါ့။ မဟုတ်ရင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း ကောင်းကောင်းမပျော်နိုင်၊ အလုပ်လည်းမပြီး၊ စာတွေလည်းမပြီးနဲ့ လူက ဘယ်နေရာမှ အသုံးမဝင်သလိုခံစားရပြီးပျော်ရွှင်မှုကင်းမဲ့နေပါလိမ့်မယ်။
၅။ Do it now !!!
ကိုယ်တွေက အချိန်ဆွဲတဲ့နေရာမှာတော့ ချန်ပီယံပါ။ ကိုယ်တွေရဲ့ လက်သုံးစကားဖြစ်တဲ့ “အေးဆေးပါ နောက်မှ လုပ်မယ်” ဆိုပြီး တကယ့် deadline နီးမှ မမှီလို့ ပြီးစလွယ် ထလုပ်ရပါတယ်။ စာဖတ်တဲ့လူတွေထဲမှာရော အဲ့လိုလူမျိုးပါနေရင် ဝမ်းမနည်းပါနဲ့လို့…ဒါလူတိုင်းလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကောင်းမှန်းသိရင် ပြင်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော်။ ခုက စပြီး deadline နီးမှ ထလုပ်တဲ့အကျင့်လေးပြင်ပြီး “Do It Now” လို့စိတ်ထဲကရေရွတ်ပြီး ခုပဲ ထလုပ်လိုက်ပါလို့။ ဒါလေးသာ အကျင့်ဖြစ်သွားရင် ကိုယ့်အတွက်အများကြီးအကျိုးရှိစေမှာပါ။ အချိန်အလဟာသ ကုန်တာလည်းမရှိတော့ဘဲ လုပ်ငန်းခွင်မှာရော၊ ကျောင်းစာမှာရော balance ညီအောင် control လုပ်နိုင်မှာပါနော်။
ဘယ်လောက်အလုပ်များများ အိပ်ရေးတော့ဝအောင်အိပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ အလုပ်မပြီးလို့၊ စာမပြီးလို့ဆိုပြီး အိပ်ချိ်န်လျှော့တာတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ အလုပ်မပြီးရင် ဖုန်းသုံးတာလျှော့ပါ၊ အပျော်အပါးကိစ္စတွေလျှော့ပါ။ အိပ်ရေးပျက်တာများရင် လူက မလန်းဆန်းတော့ပဲ ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးတာတွေ စိတ်မကြည်လင်တာတွေဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။ အဲ့ဒီအခါ လူကစိတ်မကြည်၊ အလုပ်မပြီးနဲ့ လိမ့်ပတ်လည်ပြီး ဒီနွံထဲက ရုန်းထွက်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ တစ်ရက်လောက်အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ကြည့်ပါ။ လူက ပို နေလို့ကောင်းပြီး လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ ဦးနှောက်ကပိုအလုပ်လုပ်နိုင်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းလေးတွေအတိုင်းသာ လိုက်လုပ်ကြည့်ရင် အရင်ကထက်လူက working life နဲ့ studying life ကို ပို balance ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပြီး တစ်ရက်ထက်တစ်ရက် ပိုပျော်ရွှင်ရမယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲနော်။